China single-Inqanaba zokulwa umlilo pump mveliso kunye nabenzi | Liancheng
XBD Series Single-nqanaba Ndikhuliswa sokufunxa nkqo (Tye) Fixed-uhlobo Fire-ekulweni Pump (Unit) ilungiselelwe iimfuno umlilo-ekulweni ahlangane kumashishini mveliso kwezimbiwa zasekhaya, ukwakhiwa zobunjineli lwetshiphu emsebenzi-liphume. Esebenzisa uvavanyo ezizisampula nguRhulumente Quality Supervision & Centre Testing umlilo-zokulwa Equipment, umgangatho nokusebenza zombini zihambelane neemfuno National Standard GB6245-2006 yayo, kunye nokusebenza kwayo ithatha ukhokelo phakathi iimveliso efanayo zasekhaya.
1.Professional CFD flow software uyilo lwamkelwe, ukwandisa ukusebenza impompo kaThixo;
2.The iindawo apho amanzi ahamba khona kuquka Impompo istili, impompo ikepusi kwaye impeller zenziwe yentlaka kwii nesanti aluminiyam sokubumbela, ukuqinisekisa ezigudileyo nomzila flow lula nenkangeleko kunye nokuphucula ukusebenza impompo ngayo.
3.The uxhulumaniso ngqo phakathi motor kunye nempompo lula isakhiwo lokuqhuba eliphakathi kwaye iphucule ukusebenza nozinzo, ukwenza iyunithi pump isebenze stably, ngokukhuselekileyo efanele;
4.The shaft uphawu ngoomatshini ikuthelekiswa lula ukuba ngumhlwa; i rustiness of Shaft ngqo-ezidityanisiweyo ukuze lula ukuba ukusilela itywina ngoomatshini. XBD Series single-nqanaba elinye-sokufunxa iimpompo zibonelelwa sleeve steel stainless ukuphepha ukurusa, ayolule ubomi inkonzo impompo kunye nokunciphisa aphilileyo iindleko zokusigcina sisebenza.
5.Since kwimpompo kunye motor zibekwe kwi umngxuma enye, isakhiwo lokuqhuba esiPhakathi limi lula, ukunciphisa iindleko izibonelelo nge-20% xa kuthelekiswa nezinye iimpompo zesiqhelo.
inkqubo zokulwa umlilo
Yinyaniso: 0 ℃ ~ 80 ℃
Le series impompo athobele imilinganiselo ISO2858 and GB6245
Previous: oxwesileyo yokwahlulahlula Impompo zokulwa umlilo
Next: nqanaba elinye iqela pump zokulwa umlilo othe tye
multi-sigaba Mcetywa pump zokulwa umlilo
nqanaba elinye iqela pump zokulwa umlilo othe tye
kabini sokufunxa Split Case Pump , ehambisa yetha Machine , LAYBRARI Well ngwenya Pump , Nkqo emgceni Pump ,